ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): 88Generation Student Letter To Singapore Government
88Generation Student Letter To Singapore Government
ဒီစာက ၈၈ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေက စင်္ကာပူအစိုးရထံကို စာရေးတင်ပြထားတာပါ ။ တော်တော်လေး ကောင်းပါတယ် ။ တောင်းဆိုထားတဲ့ အချက်အလက်တွေက အားလုံး သင့်လျော်မှန်ကန် ကောင်းမွန်ပါတယ်။
၁၉၉၀ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရထားတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၊ တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးနဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ အမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်လာစေဖို့ အာဆီယံကို တောင်းဆိုတိုက်တွန်းထားတာပါ .. ။
အာဆီယံမှာ အလှည့်ကျ ဥက္ကဌဖြစ်တဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံ အနေနဲ့၊ မကြာခင် ကျင်းပမယ့် အာဆီယံ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာ၊ မြန်မာနိုင်ငံရေးပြဿနာ ပြေလည်ရေးအတွက် စဉ်းစားဆောင်ရွက်သင့်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဖော်ပြတိုက်တွန်းတဲ့ အနေနဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေက အခုလို စာပေးပို့ တိုက်တွန်းလိုက်ခြင်းပါ .. ။
Posted by LIN LET KYAL SIN at 11:52 PM
I was thinking about the call for suspension of Myanmar's ASEAN membership. I'll be usingasocial analogy to explain my thoughts on this...
It may not beagood idea to kick an errant child out ofafamily because this could cause that child to seek undesirable 'elders' for protection. If the errant child has continual communication links withatrusted family member, the child might be open for acceptance of suggestions from that particular family member.
My personal opinion is that sanctions can only hurt the common people more and cutting off communications with those in power is notaviable solution.
Readers please note that this comment is just my personal opinion (not an official one). Thanks!